Waalidka doonaya inay nafahooda kala shaqeeyan si ay u horumariyaan nolosha maalinlaha ee carruurtooda waxay u qalmaan tixgelin. Littsint.no waa websaydka waalidka doonaya inay ka shaqeeyaan maaraynta cadhada. Ujeedada waa in la gaadho aqoonta cilmi nafsiga iyo qaabka awood u siiya waalidka nafahooda inay abuuraan mid aad u amni badan iyo nolol maalinle ah oo la saadaalin kafro oo carruurtooda ah.
Haddii aad jeclaan lahayd caawimo badan oo maaraynta cadhada ah, la taliyayaasha waalidka ee Norway waxaa lagu tababaray qaabka lagu soo bandhigay e-book. Xarumaha la talinta Waalidka Noorwayjiyaanka (Familievernkontor) waxay bixiyaan kullmada waalidka, oo waxaa loola soo xidhiidhi karaa toos gudbin la’aan.
Waxaad kala doo degi kartaa e-book bilaashka ah “Hagaha Maaraynta Cadhada ee Waalidka” bogga littsint.no. e-book waxa uu ka kooban yahay 10 fiidyow oo soo bandhiga qaabka sida wanaagsan loo diyaariyay ee maarayna cadhada qaab dhab ah.
Soo deji e-book
Abka Maaraynta Cadhada
Waxaad kala soo degi kartaa abka maaraynta cadhada bilaashka ah littsint.no, Google Play ama App Store. Abkan waa agabka is caawinta ah oo ku dhisan waayo aragnimo laga helay casharada la siiyay 800 oo waalid ah kuwaas oo doonayay inay horumariyaan sida loo maareeyo cadhada dhanka carruurta.